Ikhampasi yeCarbon Fibre yeCampaign, iCarbon Fibre Pole, iCarbon Fibre Telescopic Tube, iTelektha yeCarbon Fibre Tubes Abavelisi kunye nabaThengi eChina
Inkcazo:Ikhampasi yeCarbon Fibre yeCamp,Ikholomu yeCarbon Fibre,I-Carbon Fibre Telescopic Tube,Iitelektha zeCarbon Fibre zeCarbon,,
Home > Imveliso > Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp
Iintlobo zeMveliso ze- Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ikhampasi yeCarbon Fibre yeCamp , Ikholomu yeCarbon Fibre ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Iityhubhu ezijikeleze ikhabhoni zenziwe ngokurhangqa iilineni zangaphambi kokuba zifakwe kwilayini ezijikeleze i-mandrel kwaye ziphilise ityhubhu. Isiphumo sisibhobho esikhethekileyo nesicacileyo esinobunzima kwaye bomelele. I-3K i-matte emsulwa ye-carbon ityhubhu yecarbon iyabathengisi abashushu.But 1.5K njl njl iicuba zeekhabhon fayibha ezigcweleyo ziyafumaneka ngokunjalo. Ezi ityhubhu zinokusikwa, zibambe imingxunya, zigxunyekwe, kwaye zibe nobude obahlukeneyo kunye nobukhulu. Iishubhu zethu zekhabhoni ezityheliweyo zithe tye kwaye ii-octagonal 3K twill matte ecocekileyo yemibhobho yecarbon zisoloko zisetyenziswa ekujikeni, kwii-RC zokuzonwabisa njalo njalo.
Ukudibana ngokugqibeleleyo, sinokunikezela ngee-aluminium clampes. Ngokubanzi ukuhlaba umkhosi, zenziwe ngezinto ezenziwe nge-6061-T6. Ukuba ufuna ezinye izinto, ziyafumaneka. Izixhobo, ubukhulu bemoya busekwe kwiimfuno zakho.
Ukuba awuzifumani iityhubhu zekhabhoni kunye neebhloko ozifunayo kwikhathalogu yethu, nceda usithumelele iRFQ kunye neenkcazo zakho. Singabavelisa okanye sibenze ngokwezifiso ukufezekisa iimfuno zakho ezizodwa. Ngokwomzobo wakho sinokunikezela ngetafile yecarbon fiber kunye nekhampasi.
Ikhampasi yeCarbon Fibre yeCamp Ikholomu yeCarbon Fibre I-Carbon Fibre Telescopic Tube Iitelektha zeCarbon Fibre zeCarbon Ikhampasi yeCarbon Fibre Metal